Windscreen वशर पम्प प्रणाली मा पर्याप्त दबाव ग्लास पानी आपूर्ति गर्न प्रदान गर्दछ। यो सधैं मात्र होइन खराब मौसममा आवश्यक छ जो आफ्नो कार, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक को छ। जहाँ तपाईं स्थापित तपाईँलाई यसलाई सामना गरौं मोटर गाडीको अगाडीको शिशा वशर, के यसको विशेषताहरु र कसरी प्रतिस्थापन र सफाई गर्न छन्।
को मोटर को सञ्चालनको सिद्धान्त
आवश्यक दबाब र मोटर प्रयोग पानी आपूर्ति सिर्जना गर्न। यसको डिजाइन ब्रान्ड आधारित छ फरक छ। यो कहिलेकाहीं पानी आपूर्ति गर्ने गाडीको अगाडीको शिशा मा, तर पनि पछिल्लो-दृश्य सञ्झ्यालमा मात्र होइन आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। सामान्य मा, सञ्चालनको सिद्धान्त यो केवल एक सानो आकार छ र, ie, लुगा धुने तरल पानी मात्र होइन संग तर पनि काम गर्दछ एक आक्रामक वातावरण मा, पानी पम्प को कुनै पनि अन्य विशेषता कुनै फरक छ। गाडीको अगाडीको शिशा वशर मोटर क्षतिग्रस्त गर्न सकिँदैन, साथै कार मा कुनै पनि अन्य नोड, तर एउटै इन्जिन गर्न यसको विपरीत, यो स्वतन्त्र सजिलै प्रत्येक चालक मरम्मत गर्न सकिन्छ।
विशिष्ट कारणहरू नोड विफलता
लामो समय को लागि कार मर्मतका कार विशेषज्ञहरु को बहुमत निम्न "मानक" विफलता को मोटर भेद:
विफलता वशर स्विच गर्नुहोस्।
यी समस्या भन्दा साधारण हो। सबैभन्दा स्पष्ट र सरल - हुड अन्तर्गत नली बन्द आउन। तरल पदार्थ प्रवेश र बस हुड ठाउँ मा हालिएको। र तुरुन्तै काम सुरु - सामान्य मा, समस्या छैन महत्वपूर्ण, यो बस नली सच्याउन पर्याप्त छ।
लामो-गणनामा अभ्यास देखाएको रूप मा, संयन्त्र नै अति सरल र विश्वसनीय छ, त्यसैले यो धेरै विरलै छ असफल। अर्को कुरा सम्पर्क ऑक्सीकरण र सही संकेत दिन सक्दैन छन् भन्ने छ। पंप को काग मार्फत धक्का गर्न सक्षम छैन भनेर वा सबै खियाले र माटो हरायो। यस अवस्थामा मोटर को वशर सञ्चालन गर्दैन भने, तपाईं बुझ्न र के जाँदै थियो हेर्नु पर्छ, कुनै पनि मामला मा, फरक छन्। कहिलेकाहीं कारण सतहमा छन्।
एक पुरा को भागहरु
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, विन्डो लुगा धुने सिस्टम छैन कि गाह्रो छ। मोटर, एक ट्यांक र injectors: केहि सरल घटक हुन्छन्। निस्सन्देह, यो वशर तरल पदार्थ बित्दै भएको लाइन छ। पम्प एक टि गर्न फिट जो दबाव तरल, पम्पिंग छ। टि - वशर तरल पदार्थ वाल्व। यसबाहेक, चुच्चो मार्फत यो गाडीको अगाडीको शिशा wipers को केन्द्र मा सिधै sprayed र परिधि द्वारा लगे छ। केही जटिल, तर एकै समयमा विवरण धेरै छन्। एक दोष को घटना मा तुरुन्तै जाँच र ट्यांक को निष्ठा कायम र चुच्चो यसलाई हटाउन पर्छ भनेर माटो भरिएको थियो, सम्भव छ। पंप थप निरीक्षण - को गूंज भने, त्यसपछि सबै कुरा क्रममा छ। भने, विच्छेद र पूर्ण हामी सफा र टर्मिनलहरु सफा। राजमार्ग - पनि एकदम महत्वपूर्ण तत्व हो। गर्न सक्छन् कतै दुबला वा अवरोध र तरल पारित हुनेछ। र, को पाठ्यक्रम, भूमिका नलिका खेल्छन्। तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न वशर तरल पदार्थ यो धेरै खण्डमा sprayed। यो हामी साना व्यास को कि स्प्रे प्वालहरू निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। तसर्थ, त्यहाँ तिनीहरूले भरा गर्दा अवस्थामा छन् र सिस्टम काम रोक।
गाडीको अगाडीको शिशा वशर मोटर कसरी विस्थापन गर्न
कार को ब्रान्ड आधारमा डिजाइन को अलिकति उच्च मोटर उल्लेख रूपमा फरक हुन सक्छ। यो पनि यसको स्थान लागू हुन्छ। तैपनि, तपाईं वशर ट्यांक पाउन सक्नुहुन्छ भने, समस्या उत्पन्न हुँदैन। उपकरण के आवश्यक छ, त्यसैले यो एक साधारण समतल र फिलिप्स पेचकस, र चाबी को एक सेट छ।
सामान लागि जाँदा, त्यसपछि आफ्नो मूल्य ट्याग सानो छ। किनमेल 500-1 के प्राप्त गर्नेछन् आधारमा 500 rubles खर्च हुनेछ। त्यसपछि परिवर्तन गर्न प्रत्यक्ष जानुहोस्। हामी ट्यांक र मोटर पाउन। को टर्मिनलहरु विच्छेद, तिनीहरूले जाँच गर्न तुरुन्तै उचित। त्यहाँ खियाले को ठूलो रकम छ भने, त्यसपछि यसलाई आवश्यक ध्यान हटाउन र प्रणालीको कार्यक्षमता परीक्षण गर्न प्रयास छ।
हामी मरम्मत जारी
एक पटक तपाईं जहाँ वशर मोटर यसलाई पहिचान गरेको छ, र जडान विच्छेद, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्। प्रणाली उपलब्ध यदि खर्च नगरेर। यो लागि नली र उपयुक्त जडान टुट्छ। त्यसपछि तपाईं छाप स्लिभ को सेवन धक्का गर्न आवश्यक छ। यो गर्न सजिलो तरिका सामान्यतया एक सपाट पेचकस छ। यस मामला मा, हामी केहि बिगार्न गर्न, उत्पादन भंगुर भएकोले प्रयास गर्नुहोस्। अब हामी ट्यांक देखि पंप विच्छेद र यो सफाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सुविधाजनक बाटो, प्राथमिकताको साधारण रबड मा साफ गर्न सकिन्छ - बस र चाँडै।
कति विफलता को मामला मा वशर मोटर गर्छ? यदि घरेलू कार, त्यसपछि एक सय केही rubles, यदि एक विदेशी कार - महंगा। सामान्यतया 1000 वा अधिक। तर यो त्यहाँ स्पष्ट यांत्रिक क्षति वा महत्वपूर्ण वेयर छ भने मात्र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
रबर छाप निरीक्षण
अक्सर, gaskets र छाप र सिस्टम को कारण इनकार। यो कारणले गर्दा त्यो समय dubeet टायर, चर्किएको र यति मा तथ्यलाई छ। तदनुसार, को गैसकेट यसको कार्य पूरा भएको छैन। , मर्मतको समयमा तपाईं झाडी दोष फेला भने, यो प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईं निकै आफ्नो पंप को जीवन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै अन्य ग्रन्थीहरूको लागू हुन्छ। खराब वा टूट देखिन्छ कि केहि, यो फाल्नु गर्न प्रयास गर्नुहोस्, र नयाँ आपूर्ति।
हामी अन्तिम भाग दृष्टिकोण
लगभग सधैं गाडीको अगाडीको शिशा वशर मोटर गैर-separable चल्छ। छ, तपाईं जस्तै स्टेटर र कवच रूपमा आन्तरिक भागहरु निरीक्षण प्राप्त छैन। आवास, कारखाना मा भरिएको छ असफल भागहरु मात्र प्रतिस्थापन प्रदान। तर हामी सजिलो तरिका खोजिरहेको छैन र पद व्याख्या पार्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामी एक hacksaw आवश्यक छ। यसको मद्दतले चरण को चिटिक्क propyl पम्प बनाउन र समतल पेचकस दुई आधा यसलाई विभाजित प्रयोग गरेर।
बिस्तारै ब्रश संग एङ्कर बाहिर निकाल्न को स्टेटर मोटर। यो मोड गर्न महत्वपूर्ण छ र तोड छैन। त्यसपछि हामी सफाई उतरदायित्व लिनु। चमक र खियाले को हटाउनु प्रयास गर्न सबै RUB। तेल छाप परिवर्तन कारणले जो तरल प्रवाह, र यो सबै फिर्ता इकट्ठा। यो गर्न, एक टांका फलाम वा गोंद प्रयोग गर्नुहोस्। हामी प्रदर्शन जाँच गर्नुहोस्। सबै पहनने को slightest साइन बिना काम गर्नुपर्छ।
तपाईं बाटोमा सुरक्षा कहिल्यै बेवास्ता गर्नुपर्छ। यो वशर को मोटर एक सानो आकार, उहाँले हुन सक्छ जिम्मेवारी कस्तो छ भनेर देखिन्छ हुनेछ? तर गम्भीर यसलाई विचार, कि कल्पना 120 मी / को गाडीको अगाडीको शिशा splatter माटोको मा घन्टा को एक गति मा, र तपाईं पानी संग नलिका देखि यो सफा गर्न सक्दैन, वा बस wipers को माटो धब्बा र छैन। आपतकालीन ब्रेक लगान वा दुर्घटनामा - फलस्वरूप। यो सरल कारण को लागि, यद्यपि यस्तो सानो सरल एकाइ समय समयमा सेवा प्रदान गरिनु पर्दछ। एक वर्ष कम्तिमा एक पटक नलिका र राजमार्गहरू सफा र मोटर पनि कम inspected गर्न सकिन्छ, तर अझै पनि यो गरिरहेको लायक। प्रणाली राम्ररी खियाले र प्रदूषण को अन्य प्रकार को साफ छ भने, तपाईंले सबैभन्दा inopportune क्षण मा एक विफलता आशा गर्न सक्दैन। सामान्यतया, एक मोटर र स्रोत बाहिर काम भने यो विभिन्न तरिकामा संकेत, त्यसैले तपाईं पूर्व-खरिद गर्न सक्नुहुन्छ स्पेयर पार्ट्स। सबै कार इन्जिन प्रेम हेरविचार र मर्मतका, यो नोड छैन एक अपवाद छ। तसर्थ, मोटर को वशर सञ्चालन गर्दैन भने, समस्या सकेसम्म हल गर्नुपर्छ।
Orly हवाई अड्डा - साथै राम्रो प्राप्त गर्न?
भेनिस को इतिहास। भेनिस आकर्षण
समुद्र eels: व्यञ्जनहरु
को मेट्रो मास्को मा कसरी लेट चलाउन गर्छ र कसरी यो नेभिगेट गर्न?
बगैंचा मशीनरी - ठाडो कटर